ကျွန်တော်စက်မှာ ဖြစ်သော ကွန်ပျူတာ error လေး နှစ်ခု | အိမ့်မှူးသော်
ဒီတခါတော့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ရင်းနှီးသူများအတွက် ကျွန်တော့်စက်မှာ ဖြစ်သွားတဲ့ error လေး နှစ်ခုအကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။ သိတော့လည်း လွယ်လိုက်တာ။ မသိခင်တုန်းက လိုက်မေးလိုက်ရတာ လူကိုစုံသွားတာပဲ မရဘူးချည်းပဲ ပြောနေကြတယ်။ မင်းဟာ windows ပြန်တင်မှ ရမယ်တဲ့။ တစ်လလောက်ရှိပြီဖြစ်နေတာ။ ကျွန်တော် ကလိလွန်သွားတာ လည်း ပါတာပေါ့။ ပထမတစ်ခုက ဒီလိုဗျာ။ ကျွန်တော် တို့ ကွန်ပျူတာ တက်တက်လာချင်းမှာ Administrator နဲ့ User ဆိုပြီး ပေါ်လာတယ်။ အဲလိုပေါ်အောင် ကျွန်တော်လည်း လုပ်မထားမိဘူး။ ကိုယ်မသိတော့ လိုက်မေးတာပေါ့။ အားရစရာကောင်းပါတယ်။ မင်းစက် ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်တာ san ဖတ်လိုက်တဲ့ ။ အဲဒါနဲ့ scan ဖတ်ကြည့်ပါတယ်။ ဒါလည်းမရဘူး။ ပြင်ရမယ်ဆိုတာတော့ သိတယ် ၊ နေရာကို ဘယ်လိုရှာရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတာ။ ဆိုဒ်ပေါင်းလည်း စုံသွားတာပဲ အဲလိုerror လေးများ ရှိမလားလို့။ မတွေ့ဘူး။ အဲလိုကြီးနှစ်ခု ထားတယ်ဆိုတာ များသောအားဖြင့် အင်တာနက်ဆိုင်တို့ ၊ ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေမှာသာ ထားလေ့ရှိကြပါတယ် ။ ကိုယ်ပိုင်ကျတော့ အဲလိုလိုက်ပြောင်းနေရတာအလုပ်ရှုပ်တယ်လေ။ အဲဒီတော့ ဒီနေ့မှ တွေ့သွားတယ်။ တခန်းတည်းနေတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရဲ့စက်လည်း အဲလိုဖြစ်တာ ။ သူလည်းမသိလို့ ဒီတိုင်းပဲ ထားထားတယ်။ ဒီနေ့တော့ google မှာ လျှောက်မွေနှောက်ရင်း နည်းလေး တွေ့လိုက်ပါပြီ။
Error က ဒီလိုပုံလေးပါ။ Administrator and user အဲလိုလေးပေါ်နေတာ။
အဲဒါမျိုးလေးကို တစ်ခုပဲ ပေါ်အောင် အရင်ဆုံး run ကို ခေါ်ပါ။ run box ထဲမှာ lusrmgr.msc လို့ ရိုက်ထည့်ပါ။ ပြီးရင် Enter ခေါက်ပါ။အဲဒီမှာ Box တစ်ခုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလေးပေါ့။
အဲဒီသုံးကွက်ရှိတာကိုမှ အလယ်အကွက်က users ဆိုတာကို Double ကလစ်ပေးပါ။ ဒီလိုပုံလေးပေါ်လာပါ့မယ်။
အဲဒီလိုပေါ်လာရင် Administrator ဆိုတဲ့အပေါ်ကို right click ထောက်ပါ။ ပြီးရင် Properties ဆိုတာကိုသွားပါ။ ဒီလိုပုံလေး ပေါ်လာပါ့မယ်။
အဲလိုလေးပေါ်လာပြီဆိုရင် Account is disabled ဆိုတာလေးကို အမှန်ခြစ်လေး ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Apply and ok ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးရင် ကွန်ပျူတာကို restart ချလိုက်ပါ။ windows ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ ခုနကလို့ နှစ်ခုပုံစံမဖြစ်တော့ဘဲ မိမိအသုံးပြုနေသော windows ပဲ ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက start manager မှာ error လာတက်တယ်။ ဘယ်လိုတက်လဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Task Manager ကိုခေါ်လိုက်ရင် Applications , Processes , Services , Performance အစရှိသဖြင့်ပေါ့ အဲဒါလေးတွေပါတယ်။ ကျွန်တော်မှာ Applications တစ်ခုပဲ ပေါ်တော့မယ်။ Program ပိတ်ဖို့ပဲ လုပ်လို့ရတော့တာပေါ့။ တခြား CPU rate, Memory rate ကြည့်ချင်တာတို့ မရတော့ဘူးပေါ့။ ပူလားမပူလားဘယ်သိတော့မလဲနော်။ ဒီလိုကြီးပေါ်လာတာ။
ကဲသိပြီဆိုတော့ မခက်တော့ပါဘူး ။ လွယ်လွယ်လေးပါ။ အဲဒီမှာ Task ဆိုတဲ့ အပေါ်နားက နေရာကွပ်လပ်ဖြူလေးကို Double click နှိပ်ရပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ ဒီလိုအပြည့်အစုံလေး ပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့ဗျာ။
ချစ်စံအိမ် 4:01 PM
Greetings from Colorado! I'm bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I really like the information you provide here and can't wait
Here is my web page; www.balongastricocolombia.com